आयुष्मान र प्रियंकाबीच इन्गेजमेन्ट, बिहे अर्को वैशाखमा ! ::Nepali TV
You are here : Home News आयुष्मान र प्रियंकाबीच इन्गेजमेन्ट, बिहे अर्को वैशाखमा !
काठमाडौँ: केही वर्षदेखि प्रेममा रहेका अभिनेत्री प्रियंका कार्की र अभिनेता आयुष्मान देशराज जोशी इन्गेजमेन्ट गरेका छन् । शनिबार सामान्य पारिवारिक जमघटबीच दुवैले औँठी साटेका हु्न् ।
उनीहरुबीच चलचित्र 'कथा काठमाण्डू' को छायांकनदेखि प्रेम बसेको थियो । आफूहरुबीचको प्रेम सार्वजनिक गरेका दुवैले अन्तत: जीवनसाथीकारुपमा अघि बढ्ने निर्णय लिएका हुन् । इन्गेजमेन्ट कार्यक्रममा कार्की र जोशी परिवारका सदस्य सहभागी थिए ।
आयुष्मानकी बैंकर आमा रविना देशराजले इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरेका तस्बिरले दुईबीच इन्गेजमेन्ट भएको खुलेको थियो । उनले इन्स्टाग्राममा तस्बिर हाल्दै आफ्नी भावी बुहारी र छोरालाई बधाई शुभकामना दिइन् ।
पारिवारिक जमघटमा इन्गेजमेन्ट गरेका यी दुईबीचको बिहेको मितिको भने टुंगो लागेको छैन। यद्यपि प्रिय‌ंकाले आगामी वैशाखसम्ममा बिहे हुने कुरा सञ्चारमाध्यममा बताएकी छन् । यी भावी दम्पतिले यसअघि 'कथा काठमाण्डू', 'चंगा चेट' र 'छक्का पञ्जा २' फिल्ममा सँगै काम गरेका छन् ।